မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXXX | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXXX	1
Posted by Kyaemon on Nov 25, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different | 1 comment
နံမယ်ကျော်နိုင်ငံရေးသတင်းထောက်စာရေးဆရာBertil Lintner ကပြောတယ်၊လူမှုအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေး
နှစ်ရပ် ဟာ အမေရိကန်ရဲ့အဓိကအရေးတွေမဟုတ်ပါ၊(ပထဝီနိုင်ငံရေးပါ) အာရှမှာ စစ်အေးတိုက်ပွဲအသစ်
တရပ်ဝင်နေတယ်၊တချိန်ကရန်သူဗီယက်နမ်ကိုစည်းရုံးပြီးတရုပ်ကိုဝိုင်းရံ ( Contain) ဘို့လုပ်နေတယ်၊ ကချင် ဒေသခံတွေဆန္ဒပြတာကိုငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ (တရုပ်လုပ်တာကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်ပြောမလဲ?)
အနောက်မီဒီယာနဲ့ ဩဇာခံတွေ NGOတွေ ကမြစ်ဆုံရေကာတာမကောင်းကြောင်း ရးတာတွေကိုဆန်းစစ်ရမှာပါ၊
ထွက်လာတဲ့လျှပ်စစ် ၉၀ % ကိုတရုပ်ဆီပို့မယ်ဆိုတာကိုကွက်ကွက်ပြီးပြောကြတယ်၊
ဆင်တကောင်နဲ့မျက်ကန်း ၆ ဦးနဲ့တူနေတယ်၊
သတင်းသမားတိုင်းမှာလိုက်နာရိုသေရမဲ့ကျင့်စဉ် Professional Ethics ဆိုတာရှိပါတယ်၊
ပရိသတ်အတွက် အမှန်အကန်နဲ့ပြည့်စုံအောင် ရေးပေးတင်ပြဘို့ပါ၊
၁၀ % ပေးပြီး ၉၀ % ယူသွားတဲ့သယောင်ယောင် ဆိုတာ ပြောင်ချသလိုဘဲ၊ ၁၀ % ကအခမဲ့
၉၀ % က ငွေပေးပြီးဝယ်တာ၊အခွန်လဲကောက် အမြတ်ထဲကထပ်ခွဲယူ၊နောင်အပိုင်ရမယ်
မြန်မာက ၆၀ % အနှစ် ၅၀ ကျရင် မြန်မာက ၁၀၀ % ကိုမရေးပါ၊ ပဌမ နှစ် ၅၀ မှာ $ ၅၄ ဘီလျှံ billion
နောက် ၅၀ နှစ်မှာ $ 90 billion $ ၉၁ ဘီလျံ စသဖြင့်ရမှာကိုမရေးပါ၊
ရေကာတာပြိုမယ်ပြိုမယ်နဲ့လိုက်ချောက်နေတာ (အနောက်နိုင်ငံရေကာတာ သောင်းချီကျတော့
အဝေမတည့်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းပျက်အောင် လူတွေကိုစိတ်ကစားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်၊Termination of Myitsone Dam the Only Option, Say Local Kachin
ရှေ့ဆောင်းပါး # ၂၈ David Grey ပြောတဲ့ Brazil က သင်္ခဏ်းစာကိုညွှန်းလိုပါတယ်၊
Columbia University က Xiao Bao ရေးစာတမ်း က ဒီပြသနာကိုလေ့လာတယ်၊ ၁၉၉၆ မှ ၂၀၁၀ ထိ ကာလမှာ တရုပ်ပြည်က
ရေကာတာရဲ့အကျိုးအမြတ်ကို ဒေသခံတွေအတွက်ဘယ်လိုမျှဝေစောင့်ရှောက်ခဲ့တာကိုအောက်ပါ စာတမ်းပြုတယ်၊
ရေကာတာက အရွယ်အစား သေးရင် လျှပ်စစ်အားရောင်းရငွေပမာဏ သေးလို့
၂ % မှ ၃ % ထိ တက်ပေးတာဖြစ်မှာပါ၊စုံစမ်းစရာပါ၊
ယူကေ အစိုးရကငွေထောက်ပံ့ပြီး iied အဖွဲ့ ဝင် Jamie Skinner ကလဲနိုင်ငံတကာဆီရောက်ရှိကာ ဒေသခံနဲ့ရေကာတာအကျိုး မျှယူနည်းအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခဲ့တယ်၊
အပေးအယူ ညှိနှိုင်းရာမှာ လက်နက်တန်ဆာပလာသဘွယ် (နည်းလမ်းကောင်း)တခုဖြစ်တယ်၊
မလိုအပ်တဲ့ အငြင်းပွါးမှု အခြေအတင် တွေသက်သာပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ကို ရေရှည်ခံစားနိုင်ကြမယ်၊
ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ဗမာတကျပ် ကချင်တကျပ် ချင်းတကျပ် ရှမ်းတကျပ် သာတူ
ညီမျှ အေးအတူပူအမျှ မူကဘဲကောင်းပါတယ်၊
လူမျိုးစုဒေသ ဒေသခံတွေဘယ်လို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ရံပုံငွေတွေချမှတ်ခွဲဝေပေးမယ်ဆိုတာ
၂၊ ပြည်မ အကျိုး
တဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်၊ရေကာတာ လုံးဝ မ စ ခင်ကတမျိုးပါ၊လျော်ကြေးဆိုတာမှမရှိတာ၊
၃က၊ ရေကာတာလုပ်လက်စနဲ့ဆက်လုပ်ရင် $ သန်း ၁၀၀၀ ($ တဘီလျံ)လျော်ဘို့မလို၊
ဆက်မလုပ်ရင် $ တဘီလျံလျော်ရတယ်,
ဥပမာ ၄ထပ်တိုက်ဆောက်တာ၂ထပ်လဲရောက်လို့စွန့်ပြစ်ကာကန်ထရိုက်တာကိုလျော်နေမဲ့အစားကျန်၂ထပ်ကိုဆက်တင်ရင်အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်ဆိုတာ ဗေဒင်ဆရာကိုမေးနေဘို့မလိုပါ၊ ပါရဂူဘွဲ့ရသူသုခမိန်တွေကိုမေးနေဘို့မလိုပါ၊
[အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ၊ “x” မျဉ်းကြောင်းကနေ “၈” 8 ဂဏန်းနေရာ အရစ်ကလေးကိုရှာပါ၊
“၈” 8 ဆိုတဲ့ဂဏန်းအောက်မှာ အစက်ကလေးက ၂ထစ်ရှိတယ်၊အပေါ်ကိုကြည့်ရင်
၄ ထစ်မှာအစက်နောက်တစက်ရှိတယ်၊ဒီအစက်၂လုံးကဘယ်နှထစ်ကွာသလဲ? အဖြေက ၆ ထစ် (၄ထစ်+၂ထစ်)]
၃ခ၊ ဆက်လုပ်ပြီးလည်ပတ်လို့အနှစ် ၅၀ မှာ၅၄ဘီလျံရမယ်၊
(အစက် “P” က ၅ ထစ် မြင့်တယ်၊အစက် “S” က မြေအောက် ၃ထစ် ဆင်းရတယ်၊
ဒီ အစက် ၂လုံးကတည့်တည့်မဟုတ်သော်လည်း “၈” ထစ် ထက်မနဲကွာတယ်)၊
ဆက်လုပ်လို့ အနှစ် ၅၀ မှာ $ ၅၄ ဘီလျံ ရမယ်လို့ပြောရင် သင်္ချာ
နည်းအရ သိပ်မမှန်ပါ၊ ဘာပြုလို့လဲ ? အရှုံးသက်သာလိုက်တဲ့လျော်ကြေးကလဲ
စင်စစ်အားဖြင့် $ ၁ ဘီလျံ လက်ထဲကငွေ မထွက်ရတဲ့အပြင် $ ၅၄ ဘီ လျံ ငွေသစ်တွေကဝင်လာလို့ $ ၅၅ ဘီးလျံ ရလိုက်တာကို သင်္ချာနည်းနဲ့တွက်ရမှာပါ၊
အာက်ပါ ” လင့် link” ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၊ပြီးတော့ ရကာတ ပုံ က ၁၀၀၆၀၀ ကျာ် “ကြိုက် like” ကိုနှိပ်ပေးပါ၊